Dad Shuban Biyood Ugu Geeriyooday Somaliland – Goobjoog News
Dad Shuban Biyood Ugu Geeriyooday Somaliland
Laba qof ayaa ugu geeriyooday shuban deegaanka Wajaale ee galbeedka Somaliland, labadan oo kala ahaa nin dhallinyaro ah iyo ilmo da’ahaan 10 jir ka yar ayaa kala geeriyooday labadii maalmood ee la soo dhaafay , waxaana wali hadda xanuunkaasi u jiifa tiro dad ah oo ku dhaw toban qof .
Wasiir ku xigeenka caafimaadka ee maamulka Somaliland Xasan Daahir Dhimbiil ayaa sheegay in shubaka ka dilaacay deegaankaasi uu halis ugu jiro in tiro kale oo dad ahna uu galaafto “ Wajaale oo ah deegaanka xuduud ah waxa ka dilaacay shubankaasi labada qof u geeriyoodeen waxaanu aaminsanahay in cudurku oo ka yimi dhanka Etniopia , hada dad badan ayuu hayaa shubanku waxaanu sidoo kale laga soo sheegayaa deegaano hoos taga Wajaale oo ah dhul baadiye ah “ ayuu yiri Wasiir ku-xigeenku.
Wasiirka ayaa sheegay inay qorshaynayaa in meelaha biyo fariisiga ah inay daweeyaan si aanu u sii faafin cuduruku , waxaanu intaasi ku daray inay jiro xaalad caafimad darro deegaano kala duwna oo ka tirsan Somaliland .
Dhinaca kale deegaan magaalada Burco 8 KM dhanka koonfureed kaga beegan waxa geeriyooday Hooyo iyo gabar yar oo ay dhashay taasi oo wasaarada caafimaadka Somaliland ku tilmaantay inay nafaqa darro ka dhalatay abaaraha ay sababsatay .
Warbixin : Heshiisyada Shidaalka iyo Shirkadaha Lala Galay
Ktcsmj cqyivy Cialis mail order order cialis online
Wqupnm xeqzdk lowest price on generic viagra canadian pharmacy cialis 20mg
Vtugkj pbfvbh viagra overnight cialis dosage 40 mg